HomeWararka CaalamkaShacabka Sweden oo doorbidaya in lagu biiro Ururka Nato
Toddobaadkii labaad oo xiriir ah, inta badan Swedishku waxay taageersan yihiin ku biirista NATO, sida lagu sheegay sahan cusub .
Sahankan oo ay samaysay xarunta Novus ayaa muujisay in boqolkiiba 54 dadka iswiidhishka ahi ay taageeraan xubinnimada NATO, taas oo la barbar dhigay boqolkiiba 51 todobaadkii hore.
Halka boqolkiiba 24 keliya ay sheegeen inay ka soo horjeedaan ku biiritaankan.
Marka la barbardhigo ra’yi ururintii isbuucii hore , isbedel cad ayaa laga dhex arki karaa taageerayaasha SPD ee arrinta NATO.
45% codbixiyayaasha xisbiyada ayaa taageeray xubinimada, marka la barbar dhigo 36% todobaadkii hore.
Jimcihii, wasiirka arrimaha dibadda ee Iswiidhan Anne Linde ayaa booqatay Helsinki si ay xaaladda siyaasadda ammaanka ugala hadasho Pekka Haavisto.
Sida ay sheegtay linde labada waddan ee Finland iyo Sweden midkoodna weli go’aan kama gaadhin arrinta NATO, hase yeeshee waxay ku nuuxnuuxsadeen in natiijo kasta oo ka soo baxdaba ay farriimaha NATO ee soo socda saamayn weyn ku yeelan doonaan labada waddan.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Finland, Pekka Haavisto, ayaa ku celceliyay rabitaankiisa ku aaddan in Finland iyo Sweden ay isku jiho u socdaan, isla markaana ay isku duba ridaan go’aannada NATO.
Sida laga soo xigtay ra’iisul wasaaraha Finland, Sanna Marin, fariinta Finland ee ku saabsan NATO ayaa la filayaa in la gaaro dhowr toddobaad gudahood.
Dalka Iswiidan waxaa hadda lagu falanqeynayaa siyaasadda amniga ee u dhexeysa dowladda iyo xisbiyada baarlamaanka. Warbixinta ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo arrintan marka la gaaro 13-ka May